Happy Birthday to Me" ~ စန္ဒကူး
မေပလ်ရွက်တို့ပျော်ရာမြေ သို့ (၂)
စိတ်ကူးနေတာ ကြာဇံဟင်းခါးဖြစ်ဖြစ်၊ မုန့်ဟင်းခါးဖြစ်ဖြစ် အိမ်မှာချက်.. မြန်မာမိသား စုတွေနဲ့ သူငယ်ချင်း အချို့ ဖိတ်ပြီး မွေးနေ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ချီးမွမ်း ဘုရားရှိခိုးမလို့။ ခရီးသွားပြန်ရောက်ကတည်းက နေမကောင်းဖြစ်နေတာ... အခုထိဘဲဆိုပါတော့။
ဒါနဲ့ဘဲ... တစ်ရက်တစ်ရက် ကိုယ့်ခြေတောင်ကိုယ်အနိုင်နိုင်သယ်နေရတော့ ဘာမှ မချက်ဖြစ်တော့ဘူး။
ဆုတောင်းစာတွေ၊ နှုတ်ဆက်စကားတွေများကြီးရတဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ မွေးနေ့လက်ဆောင် တစ်ခုမှမရဘူး။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လှမ်းဖုန်းဆက်ပြီး wish လုပ်တော့ ဘာကျွေးမလဲလို့မေး တာ နဲ့ ကျွန်မ ပေး...လက်ဆောင်.. ဆိုတော့ သူက လန့်ဖြန့်ပြီး..ဟဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာတုန်း.. ဘာလိုချင်လဲမေးတုန်းကတော့မယူဘူးဆို..တဲ့..
မွေးနေ့မတိုင်ခင်တုန်းကတော့ ဘယ်လိုချင်ပါ့မလဲ..မွေးနေ့ရောက်တော့ လိုချင်တဲ့စိတ် က ပေါ်လာပြန်ရော.. လူ့စိတ်နှယ်ခက်ရန်ကောလို့... .
အသက်လား --- မနှစ်ကထက်ပိုကြီးလာပီ
ချစ်သူ လဲ.. ဒီတစ်ယောက်ဘဲ
မွေးနေ့လာလည်သူတွေအတွက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်အောင် အသီးလေးတွေဘဲ ကျွေးပါ့မယ်။
Posted by စန္ဒကူး at 10:00 AM
Hppy Birthday :) မွေးနေ့မှစပြီး လိုအင်ဆန္ဒတွေ တလုံးတဝပြည့်စုံပါစေ။ လက်ဆောင်ပေးမယ့်သူ ရှိမှာပါ။ surprise ဖြစ်အောင် ဝှက်ထားတာနေမှာ။
happy birthday.....to you..
Happy birthday to you, sis! We both are October born. High five :))
မြတ်ကြည်.... ဆုတောင်းပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးနော်..ဟီးဟီး..ဘယ်သူမှ ၀ှက်ထားပုံမရပါဘူး..း)
မမရှင်လေး... ကျေးဇူး... မမ
rose... sis layy ရေ... Hi Five!!!!!
စဗျစ်သီးစားသွားတယ်... အစောကသိရင်တော့ လက်ဆောင်ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်... မွေးနေ့ရောက်ရင် မွေးနေ့ရှင်ကို မုန့်ကျွေးခိုင်းတာ အဓိပ္ပါယ်သိပ်မရှိဘူး... မွေးနေ့ရှင်ကိုတောင် ပျော်အောင်ထားရအုံးမယ်... မွေးနေ့ရှင်ဘက်က ကျွေးတာ မကျွေးတာက သူ့အပိုင်းပဲ... အဲလို ကိုယ့်မွေးနေ့မို့ ဘာကျွေးမလဲ မဗေဒါကိုလာမေးရင် မကြိုက်ဘူး... ဒါပေမဲ့ ဘာကျွေးမလဲမမေးခင် သတိတရ နှုတ်ဆက်ဖော်ရတယ်ဆိုတော့ စန္ဒကူး သူငယ်ချင်းက မဆိုးသေးပါဘူး...
Happy Birthday မမ.... ကန်ဒီက အသီးအနှံဆို အရမ်းကြိုက်တာ... အားရပါးရစားသွားတယ်နော်.. :P :D
့happy birthday to you ..........
Happy Happy To You Sis.. Wishing to see your traveling Posts :)
ဘဝတစ်လျှောက်လုံး အေးချမ်းသော နေ့ရက်များကို အပူအပင်ကင်းကင်းနဲ့ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ
ကူးကူးချစ်တဲ့သူများနဲ့ မခွဲမခွာ တစ်သက်တာလုံး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်ပါစေလို့နော်
မွေးနေ့ မှသည် ပျော်ရွှင်ပါစေ ကူးကူးရေ...
ံမွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေကူးကူးရေ... ဘုရားသခင်ထံမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာများ ကြွယ်ဝစွာခံစားရပါစေလို့ သခင်ခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့် ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်...
Happy belated birthdayး)
HAPPY BIRTHDAY..ပါ ကူးရေ...
အာဘွား အကြီးကြီးနဲ့ ပြေးလာခဲ့တယ်နော်...
ထူးမြတ်တဲ့ မွေးနေ့မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံပါစေ စန္ဒကူးရေ။
စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါလို့ လိုရာဆန္ဒတစ်လုံးတစ်ဝတည်း ပြည့်ပါစေ။
29 မှပဲ ရောက်ဖြစ်တော့တယ်။ မွေးနေ့အသီးအနှံတွေ ကုန်ဘီ မဟုတ်လား အစ်မ။ မွေးနေ့ ဆုတောင်းလေး ပါပေးရပါ့။ လက်ဆောင်လည်း မပေးနိုင်ပြန်ဘူး။
ကဲ.... မကူး တစ်ယောက် လုပ်ငန်း ကိုင်ငန်းတွေ အဆင်ပြေပြီး၊ ကိုယ်ချစ်တဲ့ သူနဲ့အိုမင်းတဲ့ အထိ ပေါင်းသင်းပြီး ဘ၀ကို မစ္ဖျိမ ပဋိပဋာ ကျကျ ဖြတ်သန်း နိုင်ပါစေသားဗျာ။
ကူးကူးတစ်ယောက် စိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
နောက်တောင်ကျနေပြီ။ Happy birthday ကူကူး။ အပေါ်က ပုံလေးက လှလိုက်တာ။
မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
ထပ်တူထပ်မျှ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျမ်းမာကြပါစေ.. လိုအင်ဆန္ဒများလဲ ပြည့်ဝပါစေနော်။